Taalibaan ayaa maamusha Imaarada Islaamiga ah ee Afgaanistaan ​​waxay jeceshahay Dumarka iyo Cafiska
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Safarka » Taalibaan ayaa maamusha Imaarada Islaamiga ah ee Afgaanistaan ​​waxay jeceshahay Dumarka iyo Cafiska
Wararka Afgaanistaan • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Dowladda • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
by Khadka Warbaahinta
Shir Jaraa'id oo Taliban
Written by Khadka Warbaahinta
Sheekada dhabta ahi way soo baxaysaa.
Taliyaha A'ad 'Taliban ayaa shirar ku qaadanaya Kabul, isagoo u xaqiijinaya ammaanka dhakhaatiirta, ganacsatada.
Af -hayeenka Daalibaan ayaa sidoo kale shir jaraa'id ku sheegay, in dowladdiisa cusub ay dammaanad qaadi doonto xuquuqda haweenka oo hoos imaaneysa 'xadka Islaamka' ka dib markii ay la wareegto Afgaanistaan.
Kooxda Talibanka ayaa ku dhawaaqday cafis guud oo loo fidinayo dhammaan mas’uuliyiinta dowladda Afgaanistaan, waxayna ugu baaqeen inay ku laabtaan shaqadooda.
Baaqa ayaa imanaya wax ka yar laba maalmood kadib markii dagaalyahanada Daalibaan ay galeen Madaxtooyada oo ay ku dhawaaqeen in dagaalka Afghanistan uu dhammaaday.
Kooxda Taliban ayaa lagu soo waramayaa inay wali wada xaajood heshiis rasmi ah oo xil wareejin ah kula jirto hoggaamiyayaasha siyaasadda ee dalka.
Ku soo dhowow Daalibaan saaxiibtinimo oo xukuma Imaarada cusub ee Islaamiga ah ee Afghanistan!
Dhanka kale Enamullah Samangani oo xubin ka ah guddiga dhaqanka ee Daalibaan ayaa sheegtay in haweenku ay ku biiraan dowladdooda cusub. Wuxuu sidoo kale ugu baaqay “dhammaan dhinacyada” inay ku soo biiraan dowladda cusub.
Isla mar ahaantaana, dukaamada ku yaal Kabul ee iibiya burqooyinka ayaa samaynayay ganacsi deg deg ah waxaana haween yar lagu arkay waddooyinka Kabul Talaadadii, sida ay wararku sheegayaan.
Intii uu socday kulankii Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay Isniintii oo ku saabsanaa dhibaatada Afgaanistaan, Danjiraha Qaramada Midoobey ee dalka Ghulam Isaczai ayaa sheegay in dadka reer Kabul ay soo wariyeen in xubnaha Taalibaan ay bilaabeen baaritaan guri-guri iyagoo raadinaya dad la shaqeeya dowladda.
Dagaalyahannada Daalibaan ayaa qabsaday Kabul
Wuxuu kaloo sheegay in uu helay warbixinno ku saabsan dilal qorsheysan iyo dhac loo geysto magaalada caasimadda ah
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden, oo khudbad telefishinka ka jeediyay Qolka Bari ee Aqalka Cad galabnimadii Isniinta, ayaa yiri "Waxaan si buuxda u taageersanahay go'aankeyga" inaan ka saaro ciidamada Mareykanka Afgaanistaan ​​iyo inuusan "ka weecan doonin qeybteyda mas'uuliyadda halka aan maanta joogno. ”
Biden wuxuu qiray in maamulkiisu uusan filaynin burburka deg -degga ah ee dowladda ka dhanka ah duulaanka Taliban. Hoggaanka Dimuqraadiga Mareykanka ayaa xusay in heshiiska ka bixitaanka uu markii hore ka wada xaajooday madaxweynihii hore Donald Trump.
Halkaan ka dhageyso Wariyaha CNN ee geesinimada leh:
Waddooyinka Kabul maanta- waxaad dareentaa inaan markhaati ka nahay taariikhda pic.twitter.com/wcVKzbT6oJ
Tweet -ga ayaa soo koobaya cabsida:
Miyaad taqaanaa sida ay haweenka Afghanistan uga baqayaan hadda? Haa, waad kaxaysan kartaa oo sawir ka qaadan kartaa iyaga. Laakiin dumarka Afgaanistaan ​​xitaa looma oggola inay shaqeeyaan.
Haddii Taliban sharciyeeyo addoonsiga, kufsiga, guurka ilmaha (faraxumayn), ma aqbali doontaa taas? Waa maxay xuduudahaaga marka ay timaado ilaalinta xuquuqda aadanaha? Miyaadan qorshayn inaad ka hor timaaddo kuwa aasaasiga ah iyo cadowga aadanaha?
Naqshad: Khadka Warbaahinta
Shaabaddii Cusub ee Imaarada Islaamiga ah ee Afgaanistaan